“တုန့်ပြန်ချင်စိတ်” ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
မခံချင်တဲ့စိတ်၊ တုန့်ပြန်ချင်တဲ့စိတ်ဟာ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ရှိတယ်။ ကိုယ့်ကို အပြုသဘောနဲ့မဟုတ်ပဲ တမင်တကာ အပြစ်ရှာပြောနေရင်၊ ကိုယ့်ကို လိုက်ကဲ့ရဲ့နေရင် တုန့်ပြန်ချင်တယ်နော်။ မဟုတ်တာလာပြောရင် ပိုလို့တောင် မခံချင်စိတ်ဖြစ်ပြီး ပိုတုန့်ပြန်ချင်နေတယ်။
စိတ်ကခိုင်းတယ် မင်းပြန်ပြောလိုက်၊ မင်းကို ဒီလိုလာပြောနေတယ်၊ ငြိမ်ခံနေမှာလား၊ ငြိမ်ခံမနေနဲ့ ပြောပစ်လိုက် လုပ်ပစ်လိုက်လို့ တိုက်တွန်းတယ်။ မာနတရားက ထပ်ဦးစီးရင် သူလိုလူကများ ‘ငါ့’ကို လာပြောနေတယ်။
သူကဘယ်လောက်ကောင်းနေ မှန်နေလို့လဲ? ဘယ်လောက် တော်နေ တတ်နေလို့လဲ? ဘယ်လောက်သိနေတာမို့လဲ? ပြောပလိုက်စမ်းပါ ပြန်တုန့်ပြန်လိုက်လို့ တိုက်တွန်းတယ်။
ပညာဗဟုသုတ ဦးစီးတဲ့ အသိဥာဏ်က တားတတ်တယ်။ မင်း ပြန်လုပ်စရာ မလိုပါဘူးကွာ။ မင်းပြန်ပြောစရာ မလိုပါဘူး။ သည်းခံတယ်ဆိုတာ ဘုရားကြိုက်တဲ့ သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အား။ ဒီလိုလူမျိုးကို ဒီလိုနည်းနဲ့ တုန့်ပြန်စရာ မလိုပါဘူးကွာ။ မင်းသည်းခံလိုက်ပါ။ ဒေါသထွက်နေသူကို ပြန်ဒေါသထွက်တာဟာ ပထမဒေါသထွက်သူထက် မိုက်မဲတယ်တဲ့။ မင်းဒေါသမထွက်နဲ့.. သည်းခံလိုက်။ သည်းခံလိုက်။ မဟုတ်တာကို မဟုတ်တာနဲ့ ပြန်တုန့်ပြန်စရာ မလိုဘူး။ သူဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း စိတ်တိုနေရမှာလား? စိတ်ထဲထားမနေပါနဲ့။ ဒီလောက်အရေးမကြီးပါဘူး။ သူကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုတာ တဒင်္ဂလေးပါ။ ကဲရဲ့တယ်ဆိုတာ လူဖျင်းလူညံ့တွေ လုပ်တတ်တဲ့အလုပ်။ သည်းခံတယ်ဆိုတာ သူတော်ကောင်းတွေကြိုက်တဲ့ အလုပ်။ ဘုရားကြိုက်တဲ့အလုပ်။
သူတော်ကောင်းတွေ ချီးမွမ်းမယ့်အလုပ်ကိုပဲ လုပ်ပါ။ တုန့်ပြန်မနေပါနဲ့ကွာ…။ ဒီလောက် မလိုအပ်ပါဘူး။
သူတော်ကောင်းတွေ ချီးမွမ်းမယ့်အလုပ်ကိုပဲ ရွေးပြီး လုပ်လိုက်ပါ။
စိတ်ထဲကနေ “တိုးတိုးလေးပြောနေပါ.. သည်းခံတယ်ဆိုတာ သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အားတဲ့” “သည်းခံတယ်ဆိုတာ သူတော်ကောင်းတွေ ချီးမွမ်းမယ့်အလုပ်”လို့…. ဒီလိုဆို သူများ လိုက်ကဲ့ရဲ့နေလည်း စိတ်ချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်။ ပါရမီလည်း ဖြစ်သွားတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု၊ ရင့်ကျက်မှု၊ လေးစားမှု တိုးလာတယ်။ တကယ်ဆို သူများတွေက ကိုယ့်ကို (အပြုသဘောမဆောင်ဘဲ) အပြစ်ပြောတာတွေဟာ ကိုယ့်ကို ရင့်ကျက်လာအောင် သည်းခံတတ်လာအောင် လုပ်ပေးနေတယ်။
ဒီလို တုန့်ပြန်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် ကိုယ့်အမှားပဲ ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ ကိုယ်က မှန်နေသော်လည်းပဲ ပြန်တုန့်ပြန်ချင်တဲ့စိတ်၊ မခံချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် သူ့အမှားဟာ ကိုယ့်အမှားဖြစ်သွားတတ်တယ်။ ကိုယ်က မခံချင်စိတ်နဲ့ လွဲမှားတဲ့နည်းနဲ့ တုန့်ပြန်လိုက်ရင် သူများမကောင်းတာ အကြောင်းပြုပြီး ကိုယ်ပါမကောင်းတဲ့သူဖြစ်အောင် လုပ်နေတာပဲ။ ဒီလောက်မလိုအပ်ပါဘူး။
လူတိုင်းနီးပါး.. ကိုယ့်အပေါ်အရင်လာစပြီး ခနဲ့တာလိုလို ကဲ့ရဲ့တာလိုလို လုပ်တာမျိုးတွေကို ပြန်တုန့်ပြန်ခဲ့ဖူးပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ခဲ့ဖူးပါလိမ့်မယ်..။ ကျွန်တော်လည်း လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဘယ်ငြိမ်နေပါ့မလဲ လုပ်ခဲ့ဖူးတာပေါ့။ သူများကို ပျက်စီးသွားပါစေ ဆိုတာမျိုးတော့ မလုပ်ဖူးခဲ့ပါ။ အရင်လာစပြီး ခနဲ့တာလိုလို ရွှဲ့တာလိုလို ပြောတာဆိုတာမျိုးတွေကို အငြိမ်မနေဘူး။ ပြန်တုန့်ပြန်ချင်တယ်။ ပြန်တုန့်ပြန်ခဲ့ဖူးတယ်။ အကြိမ်ကြိမ်ပဲဗျ။
ဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ ကိုယ့်အတွက် ဘာကျန်သွားသလဲ? ဘာအကျိုးရှိလဲ?
ကိုယ့်အတွက်ကော အကျိုးရှိသွားလား? သူ့အတွက်ကော အကျိုးရှိသွားလား?
ရန်ငြိုးရန်စပဲ အဖက်တင်တယ်။ ရန်ငြိုးရန်စပဲ ကျန်တယ်။ အလဟသ ကိုယ့်စိတ်ဓါတ်အင်အားတွေ အချိန်တွေ ဖြုန်းပစ်လိုက်တာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ သူပြော ကိုယ်ပြောနဲ့ စိတ်အညစ်အကြေးများတာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ စိတ်ထားလည်း ကြီးမလာဘူး။ ဒေါသပဲကြီးလာစေတယ်။ ဒေါသကြီးတော့ အကုသိုလ်သာ ကြီးစေတယ်။ တကယ်တမ်း အရေးကြီးလှတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓါတ်အင်အားတွေ ဖြုန်းပစ်လိုက်တာကို သိပ်နှမြောတာပဲ။ ဒီလိုပြန်တုန့်ပြန်နေတာမျိုးနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓါတ်အင်အားကို မဖြုန်းပစ်ချင်ပါနဲ့။ သူက သိပ်တန်ဖိုးရှိတယ်။ မဖြုန်းမိပါစေနဲ့။
တုန့်ပြန်ချင်စိတ်တွေနဲအောင် ဘာလုပ်ရမလဲ? လို့ဆိုရင်…. ဆရာတော်ဦးဇောတိက စာအုပ်တွေကို အချိန်ပေးပြီးတော့ ဖတ်ပါ။ ကိုယ့်အတွက် အခုရော နောင်ပါ၊ ပစ္စုပ္ပန်ရော သံသရာပါအကျိုးရှိစေတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဆရာတော်ဦးဇောတိက စာအုပ်တွေဖတ်ပြီး တုန့်ပြန်ချင်စိတ်တွေ နဲလာတယ်။ ငယ်တုန်းကလို မတုန့်ပြန်ချင်တော့ဘူး။ ဒါတောင် အရှိန်မကုန်သေးဘူး။ မထင်ရင် မထင်သလို တုန့်ပြန်ချင်နေတုန်းပဲ။ အထက်ပါနည်းနဲ့ ထိန်းနေဆဲပါ။
သူတုန့်ပြန် ကိုယ်တုန့်ပြန်နဲ့ ရန်ငြိုးရန်စ တိုးစေတယ်။ တုန့်ပြန်ချင်စိတ်ဟာ ကိုယ့်စိတ် အင်အားနဲသေးတယ်ဆိုတာကို ပြနေတယ်။ အင်အားကြီးတဲ့သူရဲ့စိတ်ဟာ သည်းခံနိုင်သွားပြီ။ ခံနိုင်ရည်ရှိသွားပြီ။ စိတ်အား သေးတဲ့သူကျတော့လည်း သူများကို လိုက်မကောင်းပြောနေရမှ၊ လိုက်အပြစ်ပြောနေမှ၊ သူများစိတ်ထဲ ကသိကအောက်ဖြစ်သွားမှ၊ သူများစိတ်ဆင်းရဲ စိတ်ညစ်နေမှ သူ့ခမျာ နေသာထိုင်သာ ရှိရှာတယ်။ ဒီလိုလုပ်နေရမှ အရသာရှိတယ်လို့ အထင်ရောက်နေတယ်။ သူ့ပြောလိုက် လုပ်လိုက်လို့ တစ်ဖက်သားဂုဏ်သိက္ခာကျသွားတယ်လို့ ထင်နေမှ နေသာထိုင်သာ ရှိရှာတယ်။ သူများကျ မကျတော့ မသေချာဘူး ကိုယ်အရင်ပူလောင်ရတယ်ဆိုတာ မသိရှာဘူး။ ဒါလည်း သူ့ရဲ့စိတ်အင်အားတွေကို ဖြုန်းနေတာပဲ။ ကောင်းတဲ့ဘက်မှာ အသုံးမချနိုင်ပဲ တစ်ဖက်သားကို လိုက်ပြောဖို့ပဲ အချိန်ပေးနေရရှာတယ်။ ကောင်းတဲ့ဘက်မှာ အသုံးချတတ်ရင် အကျိုးတော်တော်ရှိမှာပဲ။
ကိုယ်ကလည်း တစ်ဖက်သားကို အပြုသဘောနဲ့မဟုတ်ပဲ အပျက်သဘောနဲ့ မပြောမိ၊ မဆိုမိအောင် စောင့်ထိန်းပါ။ ပြောချင်ဆိုချင် တုန့်ပြန်ချင်တဲ့ စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ပါ။ အသိဥာဏ်မဦးစီးပဲ စိတ်အတိုင်းသာ လွှတ်ထားရင် အကုသိုလ်တွေ ဝင်ချင်တိုင်းဝင်နဲ့ ကိုယ့်ဘဝလမ်းလည်း အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘဝလမ်းကို အဆင်ပြေပြေနေချင်ရင် စောင့်စည်းနိုင်မှ ဖြစ်မယ်။ မစောင့်စည်းခဲ့လို့ပဲ အဆင်မပြေခဲ့တာတွေ များပြီ။ မထိန်းချုပ်လို့ပဲ ပြဿနာဖြစ်တာတွေ များပြီ။ တုန့်ပြန်ချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့်ပဲ ရန်ငြိုးရန်စတွေ များခဲ့ပြီ။ တဒင်္ဂ တုန့်ပြန်ချင်တဲ့စိတ်ကို မထိန်းချုပ်တတ်လို့ စိတ်ရှုတ်ရတာလည်း များပြီ။ စိတ်မညစ်သင့်ပဲ ညစ်ရတာများပြီ။ စိတ်ချမ်းသာရမယ့် စိတ်ချမ်းသာမှုတွေ ဆုံးရှုံးတာများပြီ။
နောက်ထပ် အဆင်ပြေပြေ နေသွားချင်တယ်ဆိုရင် ထိန်းချုပ်တတ်မှ ဖြစ်တော့မယ်။
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓါတ်အင်အားတွေကို မဖြုန်းတီးပဲ အကျိုးရှိစေချင်ရင်..
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု လေးစားမှုတိုးပြီး တန်ဖိုးရှိစေချင်ရင်..